Afaka mamono ny virus sy ny bakteria ny hazavana UVC
Fotoana: 2020-04-21 Hits: 524
Manaraka, hanazava amin'ny an-tsipiriany izahay what UVC lights are, how they work, their precautions for use and some commercial applications mba hanampiana anao hahazo fahalalana mazava.
Araka ny fantatsika rehetra, ny Masoandro dia fifangaroan'ny angovo maivana amin'ny halavan'ny halavan'ny halavany.
Ny halavan'ny halavan'ny halavany dia manomboka amin'ny 380 nanometres (nm) ka hatramin'ny 780 nanometers (nm) dia antsoina hoe hazavana hita maso, fa ireo izay mihoatra ny halavan'ny halavan'ny halavany dia antsoina hoe hazavana tsy hita.
UV-A: 320nm ka hatramin'ny 400 nm
UV-B: 280nm ka hatramin'ny 320nm
Afaka mitsabo aretin-koditra izy io. Fa ny fihoaram-pefy tafahoatra kosa dia hiteraka sunburn ary homamiadan'ny hoditra mihitsy aza. Ary latsaky ny 2% ny UVB no mahatratra ny tany.
UV-C: 200nm ka hatramin'ny 280nm
Arakaraky ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny halavany sy ny tanjaky ny angovo no mahamaika kokoa, fa ny tsy fahampian'ny fidirana kosa no maha haingana ny fanjavonana.
Ary ny tombam-bidin'ny tsena aza dia nitombo hatramin'ny 140,000,000 dolara amerikana ka lasa 500,000,000 dolara amerikana.
Raha tsy ampy ny fatra UV, ny otrik'aretina sasany dia tsy ho simba vetivety, ary avy eo hanamboatra tsikelikely ny firafitr'izy ireo.
Izany no antony ilantsika mampiasa fiara mitovitovy amin'ny jiro ultraviolet disinfection mba hahatratratra ny disinfection.
Ka aza mino tsotra ny filazan'ny orinasa sasany fa "afaka mamono ireo viriosy sy bakteria isika", indraindray no fiteny marketing.
Tsy maintsy takatsika fa ny fahombiazana, ny fotoana ary ny vidiny no tena fototry ny safidin'ny jiro UV.
(1) Ny jiro ultraviolet nentim-paharazana dia lehibe (farafahakeliny 40cm ny haavony na ambony), fahombiazana ambany. Ny loharano jiro LED 1W dia afaka amin'ny fonony afa-tsy amin'ny habaka 1 metatra tora-droa.
(2) Ny loharanom-pahazavana amin'ny ankamaroan'ny jiro ultraviolet disinfection dia misy mercury, izay ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana raha avoaka.
(3) Ny ankamaroan'ny jiro afindran-doza ultraviolet dia jiro miendrika be dia be, toy ny UVC, UVA, ary UVB, izay azo inoana fa hamokatra ozone, mitarika amin'ny soritr'aretina toy ny havizanana, kohaka, fikosohana ny tratran'ny ati-doha, lozabe, fahatsiarovana ary fahaverezan'ny fahatsiarovana.
Amin'ity habe ity, azo ampiharina amin'ny fitaovana portable maro miaraka amin'ny fiasan'ny disinfection:
(1) Tany amboniny
Toerana mifangaro toy ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fitaovana, efitrano fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, ary saika ny toerana rehetra na ny toerana manokana.
Izahay dia afaka mampiasa vahaolana UVC amin'ny rafitry ny fanadiovana rano na ny rafitry ny fidiovana.
Ny fanadiovana ny rivotra dia manaisotra ny 99.97% amin'ny singa amin'ny rivotra an-tserasera, na izany aza, ny sivana dia tsy manaisotra zavamiaina bitika bitika patogenika, toy ny gripa.
Azontsika atao ny mampiasa vahaolana UVC amin'ny rafitra fanadiovana ny rivotra na ny rafitra rindrambaiko amin'ny fantsom-barotra amin'ny rivotra.
Taloha: Jiro UV inona no tsara indrindra ho an'ny fanodinana?